3 Talaabo oo Lagu Bilaabayo Olole Suuqeyn Fiidiyoow Ganacsi | Martech Zone
Suuqgeynta fiidiyowga waxay ku jirtaa awood buuxda iyo suuqleyda ka faa'iideysata barxadda ayaa goosan doona abaalmarinta. Laga soo bilaabo qiimeynta Youtube iyo Google illaa helitaanka rajadaada bartilmaameedka ah iyada oo loo marayo xayeysiinta fiidiyowga ee Facebook, waxyaabaha fiidiyowga ah ayaa kor ugu kacaya dusha sare ee newsfeed ka dhakhso badan marshmallow ee koko.
Marka sidee ayaad uga faa'iideysan kartaa dhexdhexaadkan caanka ah laakiin qalafsan?
Waa maxay talaabada ugu horeysa ee abuurka muuqaalka fiidiyowga ee ku mashquulsan dhagaystayaashaada?
At Videopot, Waxaan soo saareynay oo aan u suuqgeynayna fiidiyowga ganacsatada, ganacsiyada, iyo noocyada tan iyo sanadkii 2011. Waxaan shaqsi ahaan uga shaqeeyay tooska iyo tooska fiidiyowga ee loogu talagalay tababarayaasha ganacsiga ugu sarreeya iyo dhowr magac oo waaweyn suuqgeynta warbaahinta bulshada.
Waan ognahay waxa shaqeynaya, waxaanan leenahay cabirro lagu caddeeyo.
Henry Ford wuxuu isbeddelay warshadaha markii uu soo saaray khad isku imaatin ah oo loogu talagalay wax soo saarka baabuurta. Taasi waa isla habka aan ku qaadno fiidiyowga: halkaas oo tallaabo tallaabo kasta oo isdaba-joog ah ay kuugu dhowaato inaad u dhawaato wax soo saarka fiidiyowga ee guuleysta. Tallaabada ugu horreysa ee geeddi-socodkaas ayaa ah horumarinta nuxurka.
Ka bilow Istaraatiijiyad Barnaamij
Xitaa ka hor intaadan iibsan kamarad qaali ah oo leh sawir iskudhaf ah, suuqleyda waa inay marka hore dhisaan qaab (cinwaanno iyo mowduucyo) hareeraha uu ololahaaga ugu horreeya ee fiidiyowga loo qaabeyn doono. Tan waxaan ugu yeeraynaa istiraatiijiyaddii barnaamijkaaga.
Waxaan u adeegsanaa qaab 3-heer ah oo lagu horumarinayo istiraatiijiyad barnaamij oo kuguuleyn doonta saddex ujeeddooyin ganacsi oo waaweyn adiga:
Ku dheji fiidiyowyadaada bogga mid ka mid ah natiijooyinka raadinta.
U samee aragtidaada aragtida ahaan cod awood leh.
Wadida taraafikada bogga soo degitaankaaga ama dhacdada beddelaadda.
In kasta oo fiidiyo kasta ay tahay inay lahaato ujeedo aasaasi ah, Istaraatiijiyadda Mawduuca P3 kaliya kaa caawin mayso inaad sameysid cinwaanno fiidiyoow ah oo soo jiidan doona daawadahaaga koowaad laakiin raacitaanka qaabkan ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad qaabeyso waxyaabaha fiidiyowyadaada ah si aad adigu u hoggaamiso daawadayaasha inay qaadaan talaabada ku haboon.
Istaraatiijiyada Mawduuca P3
Jiid Mawduuca (Nadaafadda): Tani waa waxyaabaha soo jiita daawadayaashaada. Fiidiyowyadan waa inay ka jawaabaan su'aalaha dhagaystayaashaadu weydiinayaan maalin walba. Fiidiyowyadan ayaa qeexi kara ereyada ama aragtiyaha sidoo kale. Guud ahaan marka laga hadlayo, kani waa nuxurkaaga weligiis ah.
Tusmada Riix (Hub): Kuwani waa fiidiyowyo diirada saara wax badan oo ku saabsan astaantaada iyo shakhsiyaddaada. Sidan oo kale, kanaalkaagu wuxuu u shaqeeyaa sida kanaalka wax lagu burburiyo oo AAD KA go'aansanayso waxa daawaduhu arki doono ama maqli doono. Si kale haddii loo dhigo, adigu waad xakameysaa ajandaha, kanaalkaaguna wuxuu noqdaa "xarun" waxyaabaha la xiriira warshadahaaga.
Mawduuca Pow (Hero): Kuwani waa fiidiyowyadaada miisaaniyadaha waaweyn. Waa inay soo saaraan waxoogaa yar oo si fiican u shaqeeya markay la socdaan dhacdooyinka waaweyn ama Ciidaha ay warshadahaagu u dabaal dagaan. Tusaale ahaan, haddii aad leedahay kanaal loogu talogalay Haweenka, ka dib soo saarista fiidiyow ka weyn maalinta Hooyada ayaa si fiican kuugu adeegi kara. Haddii aad u abuurto fiidiyowyo loogu talagalay cayaaraha ama warshadaha isboortiga, Super Bowl waxay noqon kartaa munaasabad lagu soo saaro fiidiyow sare.
Isqor Tababarka Youtube ee Owen Maanta!
Tags: videopotyoutubesuuqgeynta youtubeololaha suuqgeynta youtube